परदेशकाे भुमिबाट देशलाई नियालेर हेर्दा ! | Hindu Khabar
August 7, 2020 5:25 pm || ॐ भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ||
परदेशकाे भुमिबाट देशलाई नियालेर हेर्दा !
१५ श्रावण २०७७, बिहीबार १५:५७ मा प्रकाशित In: जिल्ला, मुख्य खबर, विचार/लेख, समाज
जीवन गैरे हाल युएई दुवई सपनाको ठुलो भारी बोकेर आएको थियो तिम्रो घरको जेठो भनिने ‘छोरो’ परको परदेश । आज तिनै सपनाहरुको भारीले थिचिएर थला परेको छ प…रको परदेशमा । र, तिनै थला परेका सपनाहरुलाई ठेगान लगाउने सपना देख्दादेख्दै आजपनी घडीको सुइले ४ बजाईसकेछ। अब जानु’छ फ़ेरि पसिनासंग केही थान सपनाहरु साट्न।
जिन्दगी यसैगरी साटिएर अनि, आफैंसंग ढाटिएर चलिरहेको छ…….. ! कठै मेरो देस सपना चुहिदै छन । जस्ले बैदेसिक रोजगार लाई सपना बनाई आर्जेको लगानी नेपालमा केहि गर्ने भन्थ्यो उनीहरू सयौ मेनपावर धाएर वा आफन्त को सहयोगमा चौपट धन कमाएर फलानाको सेखी झार्नु छ । वा फर्केर यसरी लगानी गरेर परिवार सहित बसिन्छ । धन बर्साइन्छ नेपाल मै रोजगारी दिने हैसियत बनाइन्छ । जुन जोस जाँगर थियो नी त्यसको केहि भाग त काममा लागे पछि हुत्तिएको रकेट बलेर त्यसका शिला झर्छ त्यस्तै झरेर जल्दै खसेकाे थियो । त्यही हुत्ताइको बदला लिन पनि केहि देखाउनु थियो !
यता जसरी पनि टिक्ने नेपालमै हो मेरो पसिना बिक्ने मनको कुन्तरमा गुम्सिएको थियो । रोजगारी मा ङिच्च दाँत देखाउने त मेरो प्राक्टिस थियो भुकम्प ले डस्यो त्यसको बिषले पाकेको धाउ खाटा बसेको थियो । नेपालले बोलायो की भन्ने लागेको थियो । घचक्क ब्रेक लाग्यो । ब्रेकको झड्का खप्न बैदेसिक रोजगारी ले छुट दिएन । नेपाल नेपाल भनाई मात्र हुदै गयो यात्रा ले पेल्दै लग्यो । उताको अस्तवेस्त सुन्दा र देख्दा सपनाको पोकोमा प्वाल पर्यो । टाल्ने प्रयास जारी राख्नु बाध्यता थियो । धैर्यताको सिमा पार गर्न सफलताको नजिक पुग्दा माहामारीको बिगबिगी ले संसार ढाक्यो । गरि खा लाई बसि खा बनायो । छउन्जेल बसि खा यता रित्तियो उता रित्तियो प्वाल तान्नियो बडेमानको भो दशै लाग्यो । पोकै रित्तियो थोपा चुंहिदा फरक परेको थिएन तर अहिले त न पोको रह्यो न पसिना , हार खाने छटपटाउने त कातर हो । मलाई कातर बन्नु छैन । गोली लागेको छैन गर्दनमा खुकुरी परेको छैन । देसले सोच्ला भन्ने थियो ।
कठै बिरामी को औषधि मा भ्रष्टाचार, खुलेयाम जनताको छाती मै टेकेर भ्रष्टाचार छिछिछि दुई तिहाई को सरकार आफु आफुमै कठालो ताना तान कारण सुन्दा मलाई लाग्छ नेपाल भारत को अघोषित प्रदेस हो । मेरै देसको बारे यो शब्द खर्चन मन थिएन । नजिक बसेर नदेखेका कुरा अग्लाईमा पुग्दा देखिन्छन । ती भारतीय चेली जस्को भारतमा वार्ड अध्यक्ष लड्ने हैसियत थिएन नेपालमा सासंद हल्लाउने ? देसको शासन ब्यबस्था लाई हस्तक्षेप गर्ने अवस्था ल्याउने ? कयौ नेपाली का साथमा नागरिकता छैन । तिनलाई बिवाहित हुनासाथ नागरिकता चाहिने ? तीनका देसमा त्यहि छ ? नेपालमा सुसासन छ त ? सुरक्षित वातावरण छ त ? आफ्ना नागरिक र देस प्रति साच्चीकै माया छ त ? देस मै फर्केर मर्ने चाहाना भएका हरू पनि छटपटाई छटपटाई प्राण त्यगेको देख्दा निन्याउरो मुख लगाउनु परेको छ । अझै रेमिट्यान्समा कमि आउदैन रे लाज भन्ने छैन युवा तस्करी गर्न ? सरकार को कार्य सैली नफेरिएको देख्दा जंगबहादुर बन्न मन लाग्छ । क्यार्नु बन्छु भनेर नभैदो रैछ। ब्यबसायी र जनतालाई थुनेर कर को ताकेता , बैंक किस्ताको ताकेता , सटर भाडाको ताकेता , साहूको ताकेता , बच्चा स्कूल गएकै छैन स्कूल फि को ताकेता , रासन पानी बच्चाको माग समस्यै समस्या कसरी सहनु ।कोरोना लाई दोष ? आत्महत्या को रेकर्ड कहाँ पुग्यो ? अब घट्ला ? कोरोना कै चिन्ता थियो भने लक डाउन गरेर नियन्त्रण तिर लाग्नु पर्ने होईन ? उद्दारका नाममा जनतालाई चर्को हवाई भाडा असुल्ने ? क्वारेन्टाईनको हालत बलात्कार हुनु पर्ने ? छटपटाएर मर्नु पर्ने ? गाऊँ गाऊँ का कुना कुना का स्कूल प्रयोग गर्ने ? त्याहाँ शिक्षक त बस्छन बस्दैनन् स्वास्थ्य चौकी छ ? कृषि गरेर जनता पाल्ने वातावरण बनाउने की त्रसित बनाएर गुम्स्याउने ? हुनत नेपालको उत्पादन डोजर लगाउने अनि तिमीहरूका सम्धी कहाँ बाट ल्याउदा गुणस्तरिय स्वास्थ्य बर्दक आउछ । धुर्तहरू MCC पास गर्नु थ्यो सिमा बिवाद लाई लुकाउनु थ्यो भ्रष्टाचार गरेर देस लुछ्नु थ्यो लक डाउन गराएर मौक़ा छोप्ने नामर्द हरू
देसकै काखमा बस्नेको हालत त यस्तो छ । हामी बैदेसिक रोजगारी केहि हद सम्म सुरक्षित त यतै छौ । सरकार हामीलाई लिन नआउनु लै सकेकेकालाई सुरक्षित राख । तर माथीका केहि ताकेता बाट अछुतो छैनौ । कुरा सुन्दिने निकाय भनेको फ़ेसबुक का २/४ जना साथीले हो त्यसैले रिस यतै पोखे लौ त है…